Iikhamera zokujonga ividiyo ngokukhusela i-360 | Iindaba zeGajethi
Iindaba zeGajethi | | elektroniki, Te knoloji
Iikhamera zokujonga ividiyo ezinokukhuselwa okungama-360 zikuvumela ukuba ulawule kwaye uhlole iseti enkulu yamancedo kwisakhiwo, esahlula izimvo zabo kunye nokusondeza ngaphakathi ukufumana iinkcukacha zomzuzu zazo, ngaphandle kokulahleka komgangatho womfanekiso.
1 Yintoni ikhamera yokujonga ividiyo eyi-360?
2 Izinto eziluncedo zolu hlobo lweekhamera
3 Ukhuseleko ngokweenkcukacha
Yintoni ikhamera yokujonga ividiyo eyi-360?
Ikhamera enesidanga esingama-360 sisixhobo sobugcisa senoveli esinefayile ye- Ukukwazi ukuthatha iifoto okanye ukurekhoda iividiyo ngeelensi ezibanzi zeekona, ethi ibambe okusingqongileyo ukusuka ngaphambili nangasemva, ukongeza macala, isilingi kunye nomgangatho wendalo ephantsi kombono wakho.
Las Iikhamera zeeAlarms zeMovistar Prosegur zisetyenziswa njengenxalenye yeenkqubo zazo zokhuseleko ukuya fezekisa i-engile enkulu yokhuseleko, ngokuchanekileyo kuba zizezona zigqibeleleyo kwaye zibandakanya indawo yokudlala yovuyo inokusetyenziswa gwenxa kwiselfowuni ngokusebenzisa iapp kunye nonxibelelwano lweWi-Fi.
Ngale ndlela, uya kuba nakho ukubona yonke into eyenzekayo ngaphakathi kwekhaya lakho, iofisi okanye ishishini kuyo nayiphi na enye indawo apho ukhoyo.
Izinto eziluncedo zolu hlobo lweekhamera
Ngokuba nekhamera yokujonga ividiyo eyi-360 uyakonwabela ukuntywiliselwa okuphezulu kwindalo esingqongileyo, ubukela iifoto okanye iividiyo ngokwembono yesixhobo ngokokuphakama kunye nokuyijika ngendlela othanda ngayo ukubamba ngocoselelo yonke ikona yepropathi yakho, ukongeza:
Uyakwazi ukufikelela kwiifoto kwaye uphile ngevidiyo ezigcinwe efini, ukuzisebenzisa kwimeko apho ziyafuneka njengobungqina bolwaphulo-mthetho okanye uhlaselo.
Uninzi lwabo baneendlela ezimbini zokumamela njengenxalenye yomsebenzi wabo wokumamela intetho, ezinokubaluleka kwimeko kaxakeka. Lo msebenzi ukwavumela ukuba unxibelelane nabantwana bakho, izalamane ezindala okanye izilwanyana zasekhaya, ukuze uqiniseke ukuba baphile qete.
Kukho iimodeli ezahlukeneyo kunye noyilos, ezingabavumeli ukuba zigxunyekwe eludongeni kuphela kodwa zisetyenziselwe ukuhambahamba, zibekwe ngobulumko kuyo nayiphi na imeko onqwenela ukuyibeka esweni.
Ngokuba I-engile ye-360º ikunika umbono opheleleyo we-panoramic, ukunciphisa isidingo sokusebenzisa ezinye iikhamera ezininzi, ukunika ingxelo egcweleyo kwindalo esingqongileyo.
Baxhotyiswe ngetekhnoloji ye-infrared ye-LED ukuze ubenakho ukuyiqonda yonke imicimbi ebanjiweyo ngabo, nokuba izibane zicinyiwe.
Lawula yonke imisebenzi yepropathi yakho ngaphandle kokushiya ibhedi yakho okanye ukubakho kuloo ndawo; okoko iMovistar Prosegur Alarmas ikunika usetyenziso lweselfowuni olunxulunyaniswe neekhamera zakho zokujonga ividiyo kunye nokukhuselwa okungama-360, onokuzisebenzisa ngokufikelela kwi-intanethi kwaye ube neWi-Fi.
Ubumfihlo bakho buya kuqinisekiswa zezi khamera zetekhnoloji yokusika, kuba ngabantu abagunyazisiweyo kuphela abaya kuba nakho ukufikelela kubo kwaye ulwazi lwabo luhamba ngendlela ebhaliweyo ukunqanda izehlo zokuthintelwa okanye ukubanjiswa kwe-cyber.
Insiza efakwe nguMovistar Prosegur Alarmas iya kuba ngumlingani omkhulu, kuba ngayo unakouya kufumana izaziso ezibonisa nawuphi na umsebenzi ongaqhelekanga; Ungafikelela ukurekhodwa okurekhodwe ngeentsuku ezingama-30 zokugqibela kwaye ukhuphele kwaye wabelane ngazo.
Ukusondeza kweekhamera ezingama-360-degree kuyamangalisa, ke uya kuqonda ngobuso beenkcukacha okanye nayiphi na into enokubambisa.
Ngaphandle kwamathandabuzo, iikhamera zokujonga ividiyo ngokukhusela i-360 zezi izixhobo ezitsha oza kuzifumana namhlanje ukuncedisa inkqubo yealam; Ngabo kunokwenzeka ukuba bathathe ukhenketho olubonakalayo ngaphakathi kwendalo, ngokubabeka nje kwindawo efanelekileyo kunye nakwisikhundla esivumela elona nani likhulu leengile ukuba lifakwe.
Umbono ofikelelwe yikhamera inikezela ngamava afanayo ngokungathi ubundwendwela ifama, ukongeza kumandla okusondeza ukuthatha imifanekiso okanye ukurekhoda iividiyo, ukuba kukho imfuneko yoko.
Abasebenzisi abaninzi bagqibe kwelokuba basebenzise olu hlobo lwekhamera ephathekayo njengenxalenye yenkqubo yealam; ngokuchanekileyo ngenxa yayo ukuguquguquka, umgangatho womfanekiso kunye nokubakho konxibelelwano.
Yeyona ndlela ilungileyo, kuba ineelensi ezingama-72'2º zokuvula kunye nokujikeleza okungama-360º, apho kungasuswa khona kujikelezwe Faka iinkcukacha zemizuzu kwizithuba ezikhulu, Ukutsala ngaphakathi kumfanekiso ukuze unike inkcukacha kuwo nawuphi na umba othathwa njengowurhanelayo kwaye ulumkise abasemagunyeni abanobuchule ngexesha elifanelekileyo.
Ukuba ufuna ukuhlala uzolile kwaye ukhusele ukhuseleko lwezihlobo zakho okanye abasebenzi, kunye nokuthintela ukuba ipropathi yakho ingaphulwa zizaphuli-mthetho, eMovistar Prosegur Alarmas uyakufumana ikiti ehlangabezana neemfuno kunye nohlahlo-lwabiwo mali.
Kuyacetyiswa ukuba ubuncinci unayo yezi khamera zihambayo, ukuze ube ezandleni zakho lonke ulawulo lokhuseleko lwakho, nokuba usepropathi okanye ungaphandle kwayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » elektroniki » Iikhamera zokujonga ividiyo ngokukhusela i-360
Isitishi sokulahla inkunkuma iRoborock senza kube lula [Hlaziya]